UHunt akajabulanga ngendlela iChiefs edlale ngayo kodwa umphumela wona uwuthandile impela - Impempe
UHunt akajabulanga ngendlela iChiefs edlale ngayo kodwa umphumela wona uwuthandile impela
IKaizer Chiefs seyiwine imidlalo emithathu yeDStv Premiership kulandelana osekuyifake emaqenjini ayisishiyagalombili aphezulu kwiligi, futhi kwayenza yabukeka izogcina ingelinye lamaqembu azobe ebanga isicoco ngasekupheleni kwesizini.
Ngemuva kokuvuka ngaMaZulu FC ekuhambeni, iChiefs ilandelise ngeCape Town City, nayo eyishayele ekhaya yabe seyenza okufanayo nakwiTshakhuma Tsha Madzivhandila eyibhaxabule ngo 3-0 eFNB Stadium ngoLwesibili ntambama. Ngemuva komdlalo, umqeqeshi weZimpofana, uGavin Hunt uthe indlela abadlale ngayo ayizange imhlabe umxhwele kodwa ujabule ngoba inhloso, obekuwukuqoqa amaphuzu aphelele, ifezekile.
“Bheka, uh… sidlale ngendlela ekhombisa ukukhathala lapha nalaphaya kodwa lokho siyakuqonda kungenxa yokuthothelana kwemidlalo. Kodwa okubaluleke kakhulu bekuwuqoqa amaphuzu amathathu ukuze sisondele emaqenjini aphambili kwiligi.
“Khona bekukhona ukuvilapha kwesinye isikhathi kodwa yinto esizosebenza ngayo, siyilungise ejimini. Sijabule kakhulu ngemuva kweviki elibe yimpumelelo enkulu kithi,” kusho uHunt.
Uthe yize ekuthanda ukuthi abadlali bakhe sebenomuzwa omuhle wokufuna ukuhlasela ngaso sonke isikhathi, kodwa badinga ukubuye behlise imimoya balidlale ibhola.
“Kwesinye isikhathi sifuna ukuyoshaya igoli ngebhola nebhola esilitholayo, ngiyakuqonda ukuthi sisuke sifuna ukuya phambili siyoshaya igoli. Kodwa kumele ubuye wehlise umoya ungajahi ulinde nabanye abadlali bangene emuzweni wokuhlasela ngaleso sikhathi. Kodwa ukuqonda lezo zinto kuthatha isikhathi, akwenzeki nje kalula.
“Sizama ukuthi senze ngendlela ehlukile ngesinye isikhathi, kodwa nami kumele ngijwayele indlela abayiyona abadlali, ngithole ukuthi bayinhloboni yabadlali. Bahle kakhulu bona. Ukukhuthala sekuya ngokuba ngcono, futhi kuhle lokho. Bebekhuthele kakhulu ngesizini edlule kanti sidinga ukubuyisa lokho bese sibona yini esingayenza (ngokujaha isicoco seligi),” kuchaza uHunt.
Ezakamuva, iDStv Premiershiphttps://impempe.com/ibhola/iqhubekile-nokushoshela-ichiefs-ibhaxabula-kanzima-itshakhuma/
Previous Previous post: Iqhubekile nokushoshela iChiefs ibhaxabula kanzima iTshakhuma
Next Next post: UMaduka akafuni ukwanda kakhulu ngegoli eliphikiwe